I-China Excavator -iBig size abavelisi kunye nabathengisi | Izithuthi zaseMpuma
Excavator -Big ubungakanani
Nge-124kW / 2050rpm, le injini ihambelana nommiselo wokukhutshwa kwe-China.
Intsimi yesicelo: Indawo yemigodi, uLwakhiwo lweSixeko, iprojekthi yolondolozo lwaManzi, ezoLimo namaHlathi, iZibuko kunye neWharf, uKwakhiwa kwesikhululo seenqwelomoya.
Ukuqhekeka kwesando, ukurhola, ukubamba amaplanga, ukubamba ngamatye, ukuphazamisa i-hydraulic, ukutshintsha ngokukhawuleza ukudibanisa, kunye nokophula imibhobho yesando.
Izixhobo ezikhethiweyo zomatshini
Impompo yokuphinda usebenze
Cab isibane isilumkiso
Cab isilingi isibane
I-Cab ephezulu yomnatha wokukhusela
Cab ngaphambili umnatha eliphezulu zokhuselo
Cab ngaphambili umnatha zokuzikhusela
Ibanzi kwaye ikhululekile indawo yokusebenza
● Imibala yeenaliti zonke ezenziwe ngenaliti ezibunjiweyo zangaphakathi zilungelelaniswe ngokufanelekileyo ngokwe-ergonomics ukunciphisa ukudinwa okubonakalayo komqhubi.
● Izixhobo zolawulo zilungelelaniswe ngokufanelekileyo ukuze zifumane indawo enkulu, umbono obanzi, kunye nokusebenza okufanelekileyo kunye nokukhululeka. I-air-conditioner nayo ihlanganiswe ngaphakathi ngaphakathi.
Ulawulo lwe-elektroniki olukrelekrele kunye nolawulo oluphezulu lwamandla
● Inkqubo yomatshini wolwazi olunobuchule obutsha obunamandla okwenza ukuba ukwazi ukuqonda yonke imeko yokusebenza komatshini wakho.
● Iindlela ezine zokusebenza kwangaphambili kwe-P (Heavy-Load), E (yezoQoqosho), A (ezenzekelayo), kunye no-B (Breaking Hammer) zibonisa utshintsho olulula.
Ukuqhuba i-sprocket, i-idlers, i-roller rolls, i-roller rolls, kunye neengoma
● Iminyaka elishumi ye-R & D kunye namava okuvelisa ama-drive sprockets, i-idlers, i-track roller, i-roller rolls, kunye neetrekhi kunye neetekhnoloji eziphambili zehlabathi.
Ukuphuculwa kwesixhobo sokusebenza
● Uyilo lwamacandelo olwakhiwo lubanzi kwaye iindawo ezibalulekileyo zokuthwala umthwalo ziyaqiniswa ukumelana neemeko ezinzima zokusebenza.
● Isiseko-isityas, iipleyiti ezisecaleni, kunye neepleyiti zokuqinisa ezenziwa ngebhakethi zenziwe ngezinto ezinamandla anqabileyo ekunxibeni ukuphucula ukuzinza kwebhakethi.
● Iibhoksi, iingalo zamabhakethi, kunye namabhakethi aneenkcukacha ezahlukeneyo zinokudityaniswa ngokulula ukuze zikwazi ukumelana neemeko zokusebenza ezahlukeneyo.
Inkqubo ephezulu yokumisela
● Injini ekhokelayo ekhokelela kubuchwephesha obuphezulu.
● Ukucwangciswa kwe-hydraulic yokuqala ekumgangatho wokuqala kuxinzelelo lokusebenza kunye nelahleko ephantsi.
SE220 (Uhlobo oluqhelekileyo)
Ubude bomhlaba (Ngexesha lothutho) (mm)
Ukuphakama ngokubanzi (ukuya phezulu kwi-boom) (mm)
Ukuphakama okupheleleyo (Phezulu kwikhabhathi) (mm)
Ukucoca komhlaba we-counterweight (mm)
Ukucoca umhlaba ubuncinci (mm)
Umsila oguqula irediyasi (mm)
Ubude bomkhondo (mm)
Ukulinganisa umkhondo (mm)
Ububanzi bomkhondo (mm)
Umgangatho wobubanzi bezihlangu (mm)
Ububanzi Turntable (mm)
Umgama ukusuka kwiziko lokucheba ukuya kumsila (mm)
Ubuninzi bemba ukuphakama (mm)
Ubuninzi bokulahla (mm)
Ubunzulu bokumba (mm)
Ubunzulu bokumba nkqo (mm)
Ubuninzi bemigodi yokumba (mm)
Ubuninzi bomgama wokumba kwinqanaba lomhlaba (mm)
Isixhobo esisebenzayo sokuguqula irediyasi (mm)
Ubuninzi bokuphakamisa ubude be-bulldozer blade (mm)
Ubuninzi bokumba ubunzulu be-bulldozer blade (mm)
ICummins B5.9-C (China-II)
Emgceni 6-isilinda, uxinzelelo oluphezulu kaloliwe eqhelekileyo, kunye namanzi apholileyo kunye turbocharged
Uhlobo lwempompo hydraulic
Impompo yokuhamba ngokuhamba kabini kwe-axial
Ukuhamba kokulinganisa kukaliwe (L / min)
Umthamo webhakethi (m³)
Isantya sokujija siphezulu (r / min)
Ukusetyenziswa koomatshini kunye noxinzelelo olukhutshiweyo
Amandla okumba ingalo yebhakethi (KN)
Amandla okumba ibhakethi (KN)
Ubunzima bokusebenza kunye noxinzelelo lomhlaba
Ubunzima bokusebenza (kg)
Uxinzelelo lomhlaba (kPa)
Imoto yokuhamba ngokuhamba kwe-Axial eguquguqukayo
Isantya sokuhamba (km / h)
Utsalo amandla (KN)
Umthamo wetanki yezibaso (L)
Inkqubo yokupholisa (L)
Umthamo weoyile yeinjini (L)
Itanki ye-hydraulic tank / inkqubo yenkqubo (L)
Ukuhlolwa okubonakalayo: Uvavanyo olubonakalayo kufuneka lwenziwe ngaphambi kokuba kuqalwe uloliwe. Uvavanye ngokupheleleyo imeko-bume engqongileyo kunye nomgangatho ophantsi we-locomotive ngolu hlobo lulandelayo:
1. Nokuba kukho ukuvuza kweoyile yeoyile, ipetroli kunye nesipholisi.
2. Nokuba zikhona iibholiti ezikhululekileyo kunye namandongomane.
3. Nokuba kukho izikhewu zocingo, iisekethi ezimfutshane kunye nezihlanganisi zebhetri ezihamba ngokukhululekileyo kwisekethe yombane.
4. Nokuba kukho amabala eoyile.
5. Nokuba ngaba kukho ingqokelela yezinto zabantu.
Amanyathelo okhuseleko kulondolozo lwemihla ngemihla
Ukuhlolwa kwemihla ngemihla likhonkco elibalulekileyo lokuqinisekisa ukuba abembi be-hydraulic banokugcina ukusebenza ngokufanelekileyo ixesha elide. Ingakumbi kubantu abaziqeshileyo, ukwenza umsebenzi olungileyo kuvavanyo lwemihla ngemihla kunokunciphisa iindleko zokugcinwa.
Okokuqala, ujikeleze umatshini kabini ukuze ujonge inkangeleko kwaye ingaba i-chassis yoomatshini ayiqhelekanga, nokuba ngaba i-slewing bearing ine-grease outflow, emva koko ujonge isixhobo sokuqhekeza isinciphisi kunye neziqhoboshi ze-bolt ze-crawler. Ukuba ukuqiniswa kuqinisiwe, ukubuyiselwa kufuneka kutshintshwe ngexesha. Kuba ukumbiwa kwamavili, kufuneka ukhangele ukuba amavili aqhelekile kwaye uzinzo koxinzelelo lomoya.
Jonga ukuba amazinyo emele we excavator anokunxiba okuninzi. Kuyaqondakala ukuba ukunxiba kwamazinyo ebhakethi kuya kukonyusa uxhathiso ngexesha lenkqubo yokwakha, kuya kuchaphazela kakhulu ukusebenza ngokukuko, kunye nokunyusa ukuwohloka kwamalungu ezixhobo.
Jonga intonga kunye nesilinda xa kukho iintanda okanye ukuvuza kweoyile. Jonga i-electrolyte yebhetri ukunqanda ukuba ngaphantsi kwezinga eliphantsi.
Isihluzi somoya siyinxalenye ebalulekileyo yokuthintela isixa esikhulu somoya onothuli ukuba ungangeni kwisicoci kwaye kufuneka ihlolwe kwaye icocwe rhoqo.
Rhoqo jonga ukuba ipetroli, ioyile yokuthambisa, i-hydraulic oyile, isipholisi, njl njl kufuneka zongezwe, kwaye kungcono ukukhetha ioyile ngokwemiyalelo kwaye uyigcine icocekile.
Jonga emva kokuqala
1. Nokuba impempe nazo zonke iimitha zikwimeko elungileyo.
2. Injini yokuqala ilizwe, ingxolo kunye nombala wegesi wokukhupha.
3. Nokuba kukho ukuvuza kweoyile ye-organic, ipetroli kunye nesipholisi.
Amabakala ahlukeneyo edizili kufuneka akhethwe ngokwamaqondo obushushu ahlukeneyo (jonga iTheyibhile 1); Idizili ayinakuxutywa nobumdaka, uthuli namanzi, kungenjalo umpompo wamafutha uya kunxitywa ngaphambi kwexesha; Umxholo ophezulu weparafini nesalfure kumafutha akumgangatho ophantsi ziya kuchaphazela i-injini Yenza umonakalo; itanki yezibaso kufuneka igcwaliswe ngamafutha emva kwemisebenzi yemihla ngemihla ukunqanda amathontsi amanzi kudonga lwangaphakathi lwetanki lamafutha; i-drain valve emazantsi etanki lamafutha kufuneka ivulwe ngaphambi kokusebenza kwemihla ngemihla ukukhupha amanzi; emveni kokuba ipetroli iphelile okanye ipeyinti icinyiwe, umoya wendlela kufuneka ukhutshiwe.
Obona bushushu busezantsi be-ambient 0 ℃ -10 ℃ -20 ℃ -30 ℃
Ibanga ledizili 0 # -10 # -20 # -35 #
Imveliso Ixesha: Iintsuku ezingama-45
Ukucoca ngokwesiko: kwiintsuku ezi-5
Immimiselo yokuhlawula :
I-T / T i-50% yedipozithi kufuneka ihlawulwe ngumthengi xa esayina ikhontrakthi, intsalela kufuneka ihlawulwe xa iimpahla zigqityiwe ukuthunyelwa.
Iifilitha zomoya ezi-3
Iifilitha zokucoca amafutha
Iifilitha zeoyile ezi-3
Izihlangu ezi-3 zeziqhoboshi
Ngasentla iindawo zinikwe ngokukhululekileyo kwiilori ezithunyelwa kumazwe aphesheya, ukuqinisekisa ukuba iilori zabathengi zikwimeko entle.
Lo matshini mtsha uza kuthwaxwa kabini ngaphambi kokuba zithunyelwe, ukukhusela umzobo wazo emanzini okanye emoyeni ovela elwandle.
Egqithileyo Ukumba umgodi- SG24-3
Okulandelayo: Ubungakanani be-Excavator-Middle
Excavator -Small ubungakanani